Aspartame Nutrasweet Alert - Aspartame Disease - Help With Aspartame | The Natural Health Dictionary
Aspartame Nutrasweet Alert - Ọrịa Aspartame - Nyere Aka na Aspartame
Clifford Nwere ike 14, 2019
2 Aspartame Nutrasweet gosipụtara na 5,000 ngwaahịa na-enweghị shuga na-ere n'okpuru aha ika ndị edepụtara n'okpuru:
3 Ihe Mere Anyị Ji Kwado Ntanetị Nutrasweet Na Mmanụ Egwu
4 Ihe edemede a banyere Aspartame zọpụtara ndụ ya:
5 Aspartame Nutrasweet Alert Na Nnukwu Azụmaahịa, Nnukwu malọ ọgwụ & Aspartame Ọrịa / Mmanya
6 Usoro ọgwụgwọ kachasị mma Maka Ọrịa / Mmanya Ọrịa
7 Njikọ posts:
Asutame Nutrasweet Alert!
Ọrịa A Na-arịa Arịa Ahụ?
Ọ bụrụ na ọ sịrị “shuga na-enweghị mmiri” emetụla ya aka.
Enwere ọrịa nke otutu sclerosis, lupus systemic, fibromyalgia na Ọrịa Alzheimer gafee mba na ụwa. Otu n'ime ihe kpatara ọrịa ndị a bụ na ụlọ ahịa anyị, ụlọ ahịa ọgwụ, ụlọ ahịa swiiti, ụlọ oriri na ọ restaurantsụ andụ ya esiwo ebe ndị ahụ banye n'ụlọ anyị. Otu n'ime ọgwụ ndị na-akpata ntiwapụ ọrịa ndị a bụ aspartame; ahịa dị ụtọ dịka Nutrasweet, Equal, Spoonful, wdg.
Mgbe ọnọdụ okpomọkụ nke Aspartame gafere karịa ogo 86 F, mmanya na aspartame na-agbanwe gaa na formaldehyde ma mezie Formic acid, nke n'aka nke ya na-akpata acidosis metabolic. Icdị acid bụ otu nsí na-eji ndanda ọkụ iji gbochie ma gbuo ndị ọ metụtara. Ọnọdụ mmiri methanol dị n'ahụ ahụ nwere ike i canomi otutu sclerosis.
Gini mere eji acho ihe banyere ogwu Aspartame Nutrasweet na gini bu oria nke oria aspartame?
Mgbaàmà Ọrịa Aspartame gụnyere:
Ihe mgbaàmà Fibromyalgia
Isi ìsì na mfufu ihe
Ọ ọdịdọ n'ụzọ siri ike
Ọnụma na ime ihe ike
Icheta nnukwu ihe
Escalates Alzheimer oria
Nmebi nke omumu (dika imu uche)
Ọrịa ụbụrụ (ndị na-awa ahụ n'oge na-adịbeghị anya achọpụtawo oke dị elu nke aspartame na etuto ahụ wepụrụ na ndị ọrịa)
Escalates mgbaàmà nke ọrịa shuga.
Ndi ulo oru NutraSweet, nke ndi Monsanto mebere Aspartame, ndi maara nke oma ihe ojoo di. Agbanyeghị, dị ka Monsanto si akwado ego ndị American Diabetics Association, American Dietetic Association, United States Congress, na Conference nke American College of Likita, enwere nkata nke ịgbachi nkịtị n'ihe banyere ihe egwu dị n'ụdị anụ arụ a.
Aspartame Nutrasweet gosipụtara na 5,000 ngwaahịa na-enweghị shuga na-ere n'okpuru aha ika ndị edepụtara n'okpuru:
Aha nwoke ahụ
Nutri dị ụtọ
&Tọ & Nchekwa
Akwụkwọ akụkọ New York, na November 15th 1996, gbara otu akụkọ banyere etu ndị otu ndị America si eri nri na-ewepụta ego n'aka ụlọ ọrụ nri iji kwado ngwaahịa ha. Ya mere, ha enweghị ike ịkatọ ihe ọ bụla riri ma ọ bụ kwuo banyere njikọ ha na Monsanto.
Neurosurgeon, Dr. Russell Blaylock kwuru, sị, “Ihe ndị na-eme ka akwara dị n'ụbụrụ na-akpali akwara ozi ọnwụ, na-eme ka ụbụrụ mebie nke ụdị dịgasị iche iche.
Dr. RH Roberts, ọkachamara n'ọrịa mamịrị na ọkaibe n'ụwa banyere ọgwụ aspartame, edewokwa akwụkwọ aha ya bụ Defence Against Alzheimer Disease. Ọ na-ede banyere otu esi egbu nsị aspartame Ọrịa Alzheimer.
Ihe ọzọ kpatara Aspartame Nutrasweet Alert bụ eziokwu ahụ bụ na, taa, a na-elekọta ụmụ nwanyị dị obere dịka 30 afọ maka ọrịa Alzheimer.
Dr. Roberts ghọtara ihe na-eme mgbe mbụre ahịa Aspartame. O kwuru na ndị ọrịa mamịrị gosipụtara ihe mgbaàmà nke mfu ncheta, ọgba aghara, na enweghị mfu ọhụhụ.
N’oge ọzara, a na-ebuga ndị agha ahụ n’ọzara ebe ha nọ ọdụ 120 ogo F ọwụwa anyanwụ (cheta na 86 degrees F. methanol nsị). Ihe mgbaàmà nke Ọrịa Ọzara Stuts kwekọrọ na Ọrịa Aspartame.
Ihe Mere Anyị Ji Kwado Ntanetị Nutrasweet Na Mmanụ Egwu
“N’ọnwa Ọktoba nke 2001, nwanne m nwanyị malitere ịrịasi ezigbo ọrịa. O nwere ihe afọ juru, ọ na-enwekwa nsogbu ịgagharị. Kingga ije bụ nnukwu ọrụ. O were ihe niile o nwere wee si na akwa dina; ọ nọ n'oké ihe mgbu.
Ka ọ na-erule Machị 2002, ọ mabara ọtụtụ anụ ahụ na akwara ma nọrọ na 24 ọgwụ dị iche iche. Ndị dọkịta enweghị ike ikpebi ihe bụ nsogbu ya. Ọ nọ n'oké ihe mgbu, na -arịa ọrịa ọ na-amata na ọ na-anwụ.
O tinyere ụlọ ya, ihe ndekọ ego ụlọ akụ, mkpuchi ndụ, wdg, na aha nwa ya nwanyị nke okenye, wee gbaa mbọ hụ na a ga-elekọta ụmụ ya nke obere.
Ọ chọkwara maka ndụ ikpeazụ ya, yabụ, ọ mere atụmatụ njem gaa Florida (nke bụ isi na oche ọlụsị) maka Machị 22nd.
Na March 19, akpọrọ m ya ka m jụọ ya ụdị ule ikpeazụ ọ na-aga, wee kwuo na ha ahụghị ihe ọ bụla na ule ahụ, mana ha kwenyere na ya nwere MS.
Echetara m otu akụkọ nke enyi m, zigara m ozi, ajụrụ m nwanne m nwanyị ma ọ na-a sodaụ soda soda? Ọ gwara m na ya nwere. Nke bụ eziokwu, ọ nọ na-akwado ịkwacha otu mgbe ahụ.
Agwara m ya ka ọ ghara imeghe ya, ka ọ kwụsị ị drinkingụ soda! Ejiri m ozi m, onye ọka iwu, zitere ya otu isiokwu enyi m, zitere ya. Nwannem nwanyi kpọrọm n’ime oge 32 mgbe mkparịta ụka ekwentị anyị gwakwara m na ya akwụsịla ị sodaụ soda ahụ o nwere ike ịga ije! Ọkpụkpụ mọzụlụ gawara. O kwuru na ọ naghị enwe mmetụta 100% mana, o doro ya anya na ọ dị mma karịa.
Ọ gwara m na ya ga-aga na nke dọkịta ya n'isiokwu a, ọ ga-akpọ m mgbe ọ lọtara n'ụlọ.
N’ezie, ọ kpọrọ m, sị na dọkịta ya tụrụ ya n’anya! Ọ ga-akpọ ndị ọrịa MS ya niile ka ha chọpụta ma ha riri ụdị ụtọ ọ bụla. N'ikwu ya, Aspartame na-egbu ya na soda ihe oriri ma na-anwụ ọnwụ nwayọ na nke nhụsianya.
Mgbe o rutere Florida March 22, ihe niile ọ ga --eme bụ otu mkpụrụ ọgwụ, nke ahụ bụkwa ọgwụ e ji egbu mmadụ ọgwụ ọjọọ aspartame! Ọ nọ nke ọma na ọ ga-agbake, ọ na-aga ije! Enweghị oche nkwagharị!
Ihe edemede a banyere Aspartame zọpụtara ndụ ya:
Ọ bụrụ na ọ na-ekwu 'SUGAR FREE' na akara ngosi; Emela Ihe EGO!
N'okwu mkpirisi EPA kwuru, ekwuputara na na United States na 2001 enwere oria nke otutu sclerosis na system lupus. Ha enweghị ike ikewapụ ihe kpatara ya.
N’ihi nke a, a na-achọpụta na ọtụtụ ndị mmadụ njehie. Ọ bụ ezie na otutu sclerosis abụghị ikpe ọnwụ, mmiri ọgwụ methanol bụ!
Sistem lupus aburula ihe juputara na otutu sclerosis, ọkachasị ndị na-a Diụ ihe oriri Dike Coke na ndị na-a Diụ mmanya.
Onye a na-eme ihe amabeghị na aspartame bụ onye mere ya. Ọ na-aga n'ihu iji ya; imejọ lupus ahụ ruo n’ókè ọ nwere ike bụrụ ọnọdụ na-egbu ndụ. Anyị ahụla ndị ọrịa nwere lupus sistem na-aghọ asymptotic, ozugbo ewepụsịrị nri sodas.
N'ihe banyere ndị chọpụtara na ọtụtụ ọrịa Sclerosis, ọtụtụ ihe mgbaàmà ahụ na-apụ n'anya. Anyị ahụla ọtụtụ ikpe ebe azụ ọhụhụ laghachiri na ntị ịnụ ihe kawanye mma.
N'oge nkuzi, ekwuru m, 'Ọ bụrụ na ị na-eji ASPARTAME (Nutra Sweet, Equal, Spoonful, wdg) na ị na-arịa fibromyalgia, tinnitus, spasms, agbapụ, mgbu, ọnya ụkwụ, ọnya isi, ọgbụgbọ, ọgbụgbọ, isi ọwụwa, isi ọwụwa, nkwonkwo mgbu, nkụda mmụọ a na-apụghị ịkọwapụta, mwakpo nchegbu, okwu na-ama jijiji, ọhụụ na-egbu mgbu, ma ọ bụ ncheta ncheta nwere ike ịnwe nsị ASPARTAME!
Ọhụrụ; mgbaàmà ndị a nwere ike ịmegharị!
Kwụsị ị sodụ mmanya sodas ma nọrọ na nche maka Aspartame na aha ọ bụla na aha mmado! Ọtụtụ nri na ihe ọ drinksụ processụ haziela nwere ya! Nke a bụ nnukwu nsogbu.
Soda oriri abụghị ngwaahịa nri! O yikarịrị ka ọ ga - eme ka ị nwee ume dị ukwuu! Ọ bụ kemịkal gbanwere, ọtụtụ sodium na aspartame nwere ngwaahịa nke na - eme ka ị nwee ezigbo carbohydrates.
Ngwa ahịa ndị a nwekwara formaldehyde, nke na-echekwa mkpụrụ ndụ abụba, ọkachasị n'úkwù na apata ụkwụ. Formaldehyde bụ ọgwụ zuru oke ma ejiri ya mee ihe dị ka mmiri ozuzo iji chebe “ụdị anụ ahụ.”
Ọtụtụ ngwaahịa anyị na-eji ụbọchị niile nwere kemịkal a mana anyị agaghị ewepu ya dịka akụkụ nke nri anyị!
Dr. HJ Roberts kwuru n'okwu nkuzi ya na oge enwereghị “nri nri” na enweghị mmụba dị ukwuu na mmega ahụ; ndị ọrịa ya furu efu kilogram 19 karịa oge ikpe.
Aspartame Nutrasweet Alert Na Nnukwu Azụmaahịa, Nnukwu malọ ọgwụ & Aspartame Ọrịa / Mmanya
Aspartame dị ize ndụ karịsịa maka ndị ọrịa mamịrị. Anyị chọpụtara na ụfọdụ ndị dibịa, ndị kwenyere na ha nwere onye ọrịa retinopathy, n'ezie, nwere mgbaàmà nke Aspartame kpatara. Ihe aspartame a na - achupu shuga di n’ime ya. N'ihi ya, ndị ọrịa mamịrị nwere ike inwe nnukwu ncheta oke n'ihi eziokwu ahụ bụ na aspartic acid na phenylalanine bụ neurotoxic mgbe ewere ya na enweghị amino acid ndị ọzọ dị mkpa maka ezigbo nguzozi.
Inggwọ ọrịa shuga bụ ihe kwesịrị ekwesị. Karịa ndị ọrịa mamịrị, aspartame na - agafe ọbara / ụbụrụ ọ wee mebie ọnya ụbụrụ; na-ebute ọkwa dị iche iche nke ụbụrụ dị iche iche, gụnyere ọdịdọ, ịda mba, ịda mba manic, ọgụ ụjọ, iwe na ọnụma na-enweghị nchịkwa.
Ihe kpatara egwu a Aut Nutrasweet di nkpa maka ndi nne na nna.
Iri aspartame na - ebute otu oria ndi a n’enweghi oria. Ndekọ na nlele na-ekpughekwa na ọtụtụ puku ụmụaka nwere ọrịa ADD na ADHD enweela ntụgharị kpamkpam na akparamagwa ha mgbe ewepụrụ kemịkal ndị a na nri ha.
Ihe a na-akpọ ọgwụ “mgbanwe mgbanwe” ọgwụ ndenye ọgwụ (Ritalin na ndị ọzọ) adịghịzi mkpa. Gwa eziokwu, obughi ihe mbu ha choro!
'A na-eme imirikiti' ụmụaka ndị a kwa ụbọchị site na iji nri ndị “ka mma” maka ha karịa shuga.
Emechikwara na aspartame dị puku kwuru puku iri nri nri Coke na nri Pepsi nke ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị na-alụ ọgụ na Ọgbọ agha, nwere ike ịbụ akụkụ nke ụta maka ihe ama ama a ma ama nke Gulf War Syndrome.
Dr. Roberts dọrọ aka ná ntị na ọ nwere ike ime ka mmadụ nwee uche azụ ma ọ bụ nwere ike imebi ihe ịmụ nwa ọzọ, ma ọ bụrụ n'oge a tụụrụ ime ya na n'oge afọ ime. Aremụaka nọrọ n'ihe ize ndụ maka nsogbu akwara ozi ọ bụla.
N'ikwu banyere ọrịa nke ọrịa akwara ozi kpatara site na ojiji nke ihe egbu egbu a, enwere ọtụtụ akụkọ akụkọ dị iche iche metụtara ụmụaka na-arịa oke ọdịdọ na nsogbu ọgba aghara ndị ọzọ.
Nke a na-eweta nsogbu: E nwere Ntị Ndị Ome Iwu mgbe etinyeghị aspartame na 100 ngwaahịa dị iche iche, a na-enwekwa mkpesa siri ike n'ihe gbasara iji ya. Kemgbe ntị nke izizi a, emeela ikpe abụọ na - esote na emebeghị ihe ọ bụla. Ọgwụ na kemịkalị kemịkal nwere obere akpa miri emi.
Ebe ọ bụ na ikike MONSANTO na aspartame agwụla, enwere ugbua ihe karịrị 5,000 ngwaahịa dị na ahịa nwere kemịkal a na-egbu egbu ma a ga-ewebata ọtụtụ puku ndị ọzọ. Onye obula choro “nkpuru” nke achicha aspartame.
MONSANTO maara otú aspartame si egbu egbu, mana ha na-eche banyere uru ha karịa karịa na-ata ahụhụ maka nhụjuanya gị. Ọ bụghị ihe ijuanya na MONSANTO na-akwado thetù Ọrịa Ọrịa American, American Dietetic Association na Conference of the American College of Physicians ka aha ole na ole?
E kpughere nke a na nso nso a na New York Times. Organizationstù ndị a enweghị ike ịkatọ ihe mgbakwunye ọ bụla ma ọ bụ ziga njikọ ha na MONSANTO n'ihi na ịnata ego a, achọrọ ka ha kwado ngwaahịa ha.
Senator Howard Metzenbaum dere ma gosipụta iwu nke ga-achọ ịdọ aka na ntị banyere ngwaahịa nwere aspartame, ọkachasị gbasara ụmụ nwanyị dị ime, ụmụaka na ụmụ aka.
Billgwọ ahụ gha ehiwela ọmụmụ ọmụmụ nnwere onwe banyere nsogbu ndị a maara na nsogbu ndị dị n'ogo ndị mmadụ banyere ọdịdọ, mgbanwe na kemịkalụ ụbụrụ, mgbanwe akwara na mgbaàmà omume.
Egburu ụgwọ ahụ.
Ọgwụ ike na kemịkalụ kemịkal nwere ike maka nke a, ịhapụ ndị mmụọ ọjọọ nke ọrịa na ọnwụ na ọha mmadụ na-atụghị anya na nke amaghị. Aghọtara gị ugbu a, naanị ụzọ ị ga - esi merie agha a bụ ịkụziri ndị mmadụ zuru ezu na - asị na O nweghị ihe ndị a.
O doro anya na ị maara ndị 5-10 na ị chọghị ịhụ ahụhụ na mgbaàmà ndị a. Ọ bụrụ na mmadụ niile ekesara ndị 5-10 a Aspartame Nutrasweet Alert a, n'oge na-adịghị anya ụwa niile ga-amata ma chọọ ihe ka mma site n'ịzụ ahịa ha.
Usoro ọgwụgwọ kachasị mma Maka Ọrịa / Mmanya Ọrịa
Onye ọ bụla na-ata ahụhụ site na nsị aspartame nsen nwere ike irite uru dị ukwuu site na ị .ụ Flọ ahịa shopFreeMart, ka ọ na-agbanye n’ọrụ nke idebe ahụ, na-eme ka mkpụrụ ndụ mepee ma wepu nsị ndị ọ ga-abụrịrị ọnya dọbara n’ime ya. .Ụ mmanya ShopFreeMart Hydration Drops mesiri agbakwunye na mmiri iju mmiri nwekwara ike ịba uru dị ukwuu.
Aspartame Nutrasweet Alert Sources:
Mmanya Na-atọ ụtọ: Otu si Kachasị Eluigwe Kwa Ọkachasị iswa bụ Egbu Anyị, nke Janet Starr Hull, Pub. New Horizon Press, 1999
Ọrịa Aspartame: Ọrịa na-eleghara anya, nke HJ Roberts, Pub. Akwụkwọ dị mma, 2001
Aghugho dị ụtọ: Gịnị kpatara Splenda, Nutrasweet, na FDA nwere ike iji nwee ahụike gị, site n'aka Joseph Mercola, Kendra Degen Pearsall, Pub. Thomas Nelson, Inc. 2006.
Ihe edere bu na ihe omuma ndi nke na adi ihe n’egwuregwu mebiri n’ime otutu ihe mebere oge, tinyere formaldehyde na methanol.
Otu nnyocha emere na Ngalaba Na-ahụ Maka mwa Ahụ na Cutaneous Surgery, Mahadum nke Miami, Miami, Florida, chọrọ inyocha nkọwapụta nsị nadededededede. Ihe omumu nke ihe omumu a gosiputara ihe ndia:
Mgbe ịbatara, A na-agbaji Aspartame, gbanwee ma mee ya ka ọ bụrụ Formaldehyde n'ụdị anụ ahụ dị iche iche. Anyị na-ewepụta usoro ikpe mbu nke migraines metụtara aspartame metụtara metụtara mmeghachi omume dị mma na formaldehyde na nnwale patchine.
Ọgwụ Ndị E Nwere Ike Maka Ọrịa Ọrịa
Ọrịa Obi / Ọrịa Obi Ngwọta Ahụike Na Ọgwụ
Flọ ahịa shopFreeMart ™
Ọrịa shuga - Ọgwụ Ọgwụ na Ọgwụ
Ihe na Ọrịa Aspartame, Aspartame Nutrasweet Alertakpado acesulfame k, Tinye, ADHD, wuru afia, aspartame, aspartame allergies, aspartame ihe egwu, ọrịa aspartame, aspartame nutrasweet njikere, aspartame vs splenda, aspartame ndọrọ ego, aspartame mgbaàmà mgbaàmà, kandarel, ihe egwu nke aspartame, ọrịa shuga, nri soda na-enweghị aspartame, hà, aka na aspartame, nutrasweet, retinotherapy, sucralose na aspartame
Ọrịa ogbu ogbu na nkwonkwo. Ọgwụ Okike Dị Mkpa na Ọgwụ
Czọ Ndị Dị Egwuregwu Egwuregwu Dị Mma
6 echiche on "Aspartame Nutrasweet Alert - Ọrịa Aspartame - Nyere Aka na Aspartame"
Pingback: Na Alzheimer na Dementia - The Natural Health Dictionary
Pingback: Ahụike Anya - Ọgwụ Ọrịa - Nkọwapụta Ahụike Dị Mma
Pingback: Ọrịa shuga - Ọgwụ Ọgwụ na Ọgwụ
Pingback: Golọ Gout Remedies - Ọkọwa Okwu Ahụike
Pingback: Czọ Njikọ Legkwụ Ọgwụ - Tozọ A Ga-esi Na-emeso ramlọ Egwu Legkwụ - NHD
Pingback: Eke Ọrịa Dị Mma Maka Lupus Rash - Ọkọwa Okwu Ahụike